M oo doonaya inuu S kala kaashado caqabadda tuugsiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna Ulf Kristersson oo wareeysi bixinaya. sawir: Vilhelm Stokstad/TT
M oo doonaya inuu S kala kaashado caqabadda tuugsiga
La cusbooneeyay fredag 8 december 2017 kl 10.51
La daabacay fredag 8 december 2017 kl 08.46
Hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna Ulf Kristersson ayaa gacanta u fidiyay madaxa dawladda Stefan Löfven (S) sidii ey wada jir xal ugu heli lahaayeen su’aasha la xiriirta tuugsiga ey dadka qaarkii ku tuuksadaan barxadaha dalka inta doorashada ka horreeysa.
-Waxaannu diyaar u nahay inaannu ka caawinno sidii xal wada jir ee lagu xaaraantimeeyo tuugsiga loogu heli lahaa, sida uu war-geeyska u sheegay Ulf Kristersson.
-Xisbiga Moderaterna ayaa horay u qabay fikirkan iyadoona uu maamulka xisbiga M iminka isku dayayo sidii uu ku tuujin lahaa meel horay u bugtay. Dhanka kale Stefan Löfven, madaxa dawladda Sweden ayaa kolka khudbadihiisa la dheehdo waxaa laga dareemeyaa inuu fikir noocaasi ah qabo iyo in guud ahaan la mamnuuco tuugsiga, hase yeeshee uu shir-weynihii xisbigu go’aamiyay mid go’aan ka duwan, sida uu sheegay Tomas Ramberg oo laanta ekot uga faalooda siyaasadda arrimmaha gudaha.
Ramberg ayaa sidoo kale sheegay in baaqaani uu sidoo kale ka dambeeyo sidii loo garbin lahaa xisbiga Sverigedemokraterna (SD).
-Waxay ila tahay iney xisbiyada ku jiraan xubno badan oo aamin-san in su’aasha tuugsigu tahay mid aad u ballaaran ee aan la cabiri karin fikirrada ay bulshadu ka qabo, sida uu sheegay Ramberg.
Kulan-weynihii uu dhowaantan yeeshay xisbiga Moderaterna ayey wakiilladu si aqlabiyad leh ugu codeeyeen mamnuucid guud ee tuugsiga. Halka uu Kristersson iminka rajeeynayo inay dawladdu wada-hadal degdeg ah arrinkaa kala yeelato.
-Xushmad ayay dhalin lahayd iney xisbiyadu xal guud ka gaaraan su’aashaa, sida uu sheegay.
Xisbiga Socialdemokraterna iyo xisbiga ay xulufada ku yihiin awoodda ee Miljöpartiet ayaan maantadan aaminsaneyn mamnuucid guud ee lagu soo rogo tuugsiga.
Ma kula tahay in tuugsiga laga mamnuuco dalka?
Ha la caawiyo dadka tuugsada